Christina Aguilera Sawirro Khaas ah oo Qaawan - Fanaanad Uur Leh Oo Aan Qurxin
Iyo Christina Aguilera oo qaawan ugu dambeyntii LEAKED khadka tooska ah! Christina Aguilera (37 jir) waa fanaanad caan ah oo reer Mareykan ah una heesta dhalashada magaalada New York. Waxay ku soo kortay xiddigo iyada oo leh albumkeeda iskeed cinwaankeedu yahay 1999 ee dhaliyey Billboard Hot 100 lambarka koowaad-kali ah 'jini Dhalo', 'Maxay Gabadhu Doonaysaa', iyo 'Kaalay Ilmo Ka Badnaan'. Christina waa la guursaday ...
Christina Aguilera Ilkaha Qaawan iyo Waxqabadka Afka Sexy ee Dardargelinta Muuqaalka Rasmiga ah
Fiiri fiidiyowga cusub ee rasmiga ah ee loogu talagalay heesta 'Accelerate', halkaasoo fanaanadda caanka ah ee caanka ah Christina Aguilera taranka qaawan ay yihiin waxa ugu muhiimsan! Xtina waxay muujisay inay wali tahay mid kacsi badan oo duurjoogta ah iyadoo na siineysa timaheeda qaawan, ibta lagu daboolay caag madow oo isku dhejisan iyo wax casaan ah oo dhegdheg leh oo macaan! Waxaa jira ficil carrabkeeda ah inta ay leefleefayso qaar ...
Christina Aguilera Topless Sawir Sawir
Christina Aguilera toogasho sawir aan xad lahayn ayaa halkan ku taal, waxaadna arki kartaa ubaxyo waaweyn oo qaawan oo qurux badan oo Xtina ah! Waxay in muddo ah ka maqnayd warbaahinta dadweynaha, laakiin waxay ku soo noqotay iyada oo ka xoog iyo qaawan sidii hore! Muuqaalka hoose waxay ku muujisay ibta naasaha iyo boogaha iyada oo loo marayo shaati hufan oo casaan ah halka ay iska taagayso ...
Christina Aguilera Cleavage waa Weyn!
Jeexitaanka Christina Aguilera waa mid aad u weyn! Waan ognahay in XTina ay leedahay timo waaweyn, laakiin waayadaan dambe waxay dhex dhigtaa bartamaha muuqaalkeeda! Markan waxaa la arkay iyada oo tageysa 1 Oak Harper ka dib xaflad ka dhacday New York, iyadoo xiran dhammaan madow oo siineysa iyada kala-jeexan qoto dheer oo saxan qalin ah! Aynu ku raaxaysanno oo noqonno ...
Karen gillan xiisaha qaawan
Cyrus Miley qaawan galmada
Emma Watson photos Toob Ah
Schumer Amy xaday sawiro qaawan